Madaxweyne Farmaajo: Waxaan boogaadinayaa doorashadii xorta aheyd ee ka dhacday Baydhabo – Kalfadhi
MUQDISHO, 16 JAN 2019 (KALFADHI)-Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS) Cabdicasiis Xassan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa maanta oo Arbaca ah lagu caleema saaray magaalada Baydhabo ee Xarunta KMG ah ee Maamulka Koonfur Galbeed. Munaasabadda caleema saarkiisa ayaa waxaa ka qeybgalay, Madaxweynaha JFS, madaxda Maamulada Puntland,Jubaland,Galmudug iyo Hishabeelle, iyo xubno ka socda beesha Caalamka.
Masuuliyiinta Dowlad Goboleedyada oo hadallo ka jeediyey Munaasabadda ayaa Madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed u hambalyeeyey waxayna balanqaadeen in ay la shaqeyn doonaan Madaxweynaha iyo maamulkiisa.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Karaash oo kamid ah masuuliyiinta ka hadashay munaasabadda ayaa taabtay wanaajinta xiriirka ka dhexeeya Dowladda dhexe iyo Dowlad Goboleedyada kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay aad u xumaa.
“waxaan ku talinayaa in la hagaajiyo xiriirka ka dhexeeya Dowladda dhexe iyo Dowlad Goboleedyada maxaa yeelay waxaa fududaaneysa in si wada jir ah wax loogu qabto dalka”., ayuu yiri Axmed Karaash Madaxweyne ku xigeenka Puntland.
Cabdicasiis Xassan Maxamed (Lafta-Gareen) Madaxweynaa maanta la caleema saaray ee maamulka K/Galbeed oo khudbad ka jeediyey Munaasbadda caalama saarkiisa ayaa sheegay in ay qorshihiisa ku jirto sidii uu uga shaqeyn lahaa horumarinta degaanada koofur Galbeed, gaar ahaan dhinacayada Nabadgalyada iyo Arrimaha Bulshada.
“Waxaan ka shaqeyn doonaa horumarinta kaabayasha bulshada, nabad-galyada iyo xasilooni siyaasadeed oo ka dhalata KGS”, ayuu yiri Maxaweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed.
“waxaan balan qaadayaa inaan ka shaqeeyo tayeynta Ciidamada Koonfur Galbeed si loo xaqiijiyo ammaanka deegaanka, waxaana sidoo kale balan qaadayaa in dhammaan Ciidamada Koofur Galbeed ay helaan xuquuqdooda oo dhameystiran”, ayuu ka sheegay xafladii maanta ka dhacday Baydhabo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo ka hadlay Munaasbadda ayaa bogaadiyey sidii ay u dhacday doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed iyo guud ahaan xaaladda daganaansho ee ka jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
“waxaan bogaadinayaa sidii qurux badneynd ee ay u qabsoontay doorashada Madaxweynaha KG iyo sida musharaxiintii tartamay ay ugu qanceen natiijada”, ayuu yiri Madaxweynaha Soomaaliya oo ka qeybgalaya Xafladda caleema-saarka Madaxweyne Lafta-gareen.
“Waxaan u mahadcelinayaa Ciidamada ammaanka ee suurta geliyay iney halkaan ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal” ayuu hadalkiisa raaciyay Madaxweyne Farmaajo. “Waxaan xaqiijinayaa oo aan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo hadalkii ay halkan ka sheegeen Madaxweyne Laftta-gareen iyo Madaxweyne ku xigeenka Puntland ee ahaa in la xoojiyo xiriirka iyo wadashaqeynta Dowladda dhexe iyo maamulada,, maxaa yeelay waxaan nahay hal Dowlad”,ayuu hadalkiisa ku soo gaba-gabeeyay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Madaxweynaha Koofur Galbeed ee maanta la caleema-saaray ayaa ku guuleystay doorasho 19-kii December 2019 ka dhacday magaalada Baydhabo, markaas oo dareen kala duwan laga muujinayey guushiisa doorashada, waxaana haatan looga fadhiyaa fulinta balanqaadyadii uu sameeyay ka hor doorashada KGS.